आहा ! भैरहवा ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
प्रकाशित मिति : असार १२, २०७८ शनिबार
अहिलेको सिद्धार्थनगर भैरहवा शहर ९० वर्ष अघिसम्म सामान्य गाउँ थियो । राणाकालिन समय विक्रम संबत २००० अघि सम्म बेथरी बजार वा तौलिहवामा सदरमुकाम थियो । तर वि सं २०२० पछि एकाएक भैरहवाले विकासमा फडको मार्न सुरु गर्यो । कारण पोखरा सुनौली सड़क भैरहवा भएर जोडियो । भारतको मुख्य शहर गोरखपुरसँग यसको सडक सम्पर्क र १४ किलोमिटर नजिकको नौतनवा बजारसँग रेलले पनि नजीक पुरयायो ।
हाल भैरहवा सिद्धार्थनगर नगरपालिका १३ वडामा विभाजित एउटा आधुनिक शहरमा रुपान्तरण भै सकेको छ । ६ लेनका चिल्ला सड़कमात्र होइन, भित्री सडक पनि निकै राम्रा भएका छन् । लुम्बिनीको प्रवेशद्वार भएकाले वर्षेनी लाखौ पर्यटक यस शहर भएर लुम्बिनी पुग्ने गर्छन् । शहरमा ५ तारे देखि चार, तीनतारे सवै प्रकारका होटल र क्यासिनो समेत खुलेका छन् ।
शहर सफ़ा र सुन्दर छ । विगतमा जस्तो धुलो र हिलो छैन ।
अहिलेको भैरहवा भिडियोमा हेर्नुहोस् । भिडियो चेतन पन्तले मोबाइलबाट खिच्नुभएको हो ।
भैरहवाबाट बुटवलसम्म ६ लेन, अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल सम्म ६ लेन र लुम्बिनी सम्म ४ लेनका सड़क छन् । हाल सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले भैरहवाको उत्तर सिमानाबाट दक्षिण तर्फ आउने बर्षाको पानीलाई भैरहवामा पस्न नदिई पूर्वतर्फ डन्डा खोला र पश्चिमतर्फ घाघरा खोलामा पठाउने गरी डिजाइन र सोही अनुसार निर्माण गरिएको छ । जसले गर्दा भैरहवालाई डुबानबाट बच्न मद्दत पुगेको छ ।
सडक निर्माणगर्दा सडकको दुबै तर्फ नाला, फुट पाथ, खानेपानीको लाइन, हरियाली राख्ने गरि डिजाइन गरिएको र सोही अनुसार निर्माण गरिएको छ । कुनै युटिलिटी राख्न समेत सडकको दुबै तर्फबाट स्थान छोडिएको छ ।
सडक बलियो होस भनी माटोको अवस्था अनुसार कतै कालोपत्र र कतै ढलाई दुइ प्रकारको बनाइएको छ । प्राइमरी नाला ५० किमि बनाइएको छ जस्ले गर्दा डुबान न्यूनीकरण भएको छ ।
खानेपानी को लाइन सडकको दुबैतर्फ राख्नाले पाइप लाइन मर्मत गर्दा पर्दा पनि सडक खन्न परेको छैन । जथाभावी सडक खन्न नपर्दा सडक काटिने समस्या हल भएको छ ।
बिरुवा रोप्न सकिने ठाउमा सिधै रोप्ने र नसकिने ठाउमा पाइपको गमला बनाइ रोप्ने ब्यबस्था मिलाइएको छ । करिब २ हजार बोट हुर्केर सडकक्षेत्र हरियाली बन्दै गएको छ ।